Etu ị ga - esi choro ma degharia ederede na 3D Touch | Esi m mac
Etu aga-esi họrọ ososo na dezie ederede na 3D Touch
Egburu | | iOS, Nkuzi, ọtụtụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nke ọhụrụ ahụ iPhone 6s o iPhone 6s Plus Obi abụọ adịghị ya, nnukwu mmụba ị ga-enwe bụ ekele maka nsonye nke teknụzụ Ike Touch ugbu a bu aha ya 3D Touch. Ihe ọhụrụ a na - anọchi anya ụzọ dị iche iche si eso iPhone anyị na - emekọ ihe, na - eme ka agility nke anyị ji eme ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ na - abawanye arụpụtaghị ihe. Mana ọ bụkwa eziokwu na ọ chọrọ usoro mmụta mmụta, pere mpe, mana ọ dị mkpa. Ọ bụ ya mere taa anyị ji ewetara gị aghụghọ ọhụrụ ị ga-eji mee ọtụtụ ihe 3D Touch- Họrọ ngwa ngwa ma dezie ederede.
Iji nke ọhụrụ iPhone 6s na 6s gbakwunyere, na-ahọpụta ederede maka inwekwu edezi dịtụbeghị mfe. Iji oru ohuru 3D Touch Nwere ike ime ka ahụigodo gị bụrụ trackpad na ọtụtụ ngwa Apple ma jiri mkpịsị aka gị mee ka okwu ndị ị chọrọ dezie pụta ìhè.
Iji mee nke a, pịa ike na keyboard na nke a ga-eme ka ọ bụrụ mebere trackpad. Were slide mkpịsị aka gị na ederede ịchọrọ idezi. Pịa ike iji họrọ ederede wee pịgharịa aka gị na mkpụrụokwu iji mee ka nhọrọ gị ka mma.
Pịa nke ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ọzọ. Welite mkpịsị aka gị mgbe ịmechara wee pịa ederede ahọpụtara maka menu nhọrọ ntinye edezi iji daba gị mma. Ugbu a, naanị ihe fọdụrụ bụ idezi ederede ị họọrọ 3D Aka.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere iji 3D Touch gị iPhone 6s ma ọ bụ 6s Plus cheta mezie uche ya iji mee ka ọ dị mma iji mee ihe, na echefula ileta ndị a na usoro a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iOS » Etu aga-esi họrọ ososo na dezie ederede na 3D Touch
My keyboard agbaala ara na OS X El Capitan. Kedu ihe na-eme ebe a?